Igbe ụmụaka na wiil
Njem abụghị nanị nkọwa doro anya, kamakwa ọtụtụ obere nsogbu. Ikwesiri ịnye ihe niile gbasara gị, were ihe niile ị chọrọ. Ihe dị mfe bụ ihe eji eme njem . Ndị nne na nna na ndị na-eto eto chọrọ akpa nke ha, ebe ị nwere ike ịkwado ihe ndị ị chọrọ maka njem ahụ. Maka umuaka ngwa a bu ihe di iche iche nke nnwere onwe .
Ugboro obere obere akpa ụmụaka na-ebugharị na wiil mgbe ụfọdụ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha! Nke mbụ, ọ dị mfe ibufe ụmụaka. Nke abuo, ugbo na wiil maka umu nwere ike ibu uzo. N'ihi ọkpọka ma ọ bụ eriri dị iche iche, ọ na-adaba na-eburu ha ọbụna na nwatakịrị nọ n'elu. Nke atọ, nwa gị ga-anọ ebe ahụ mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ na-esi ike ịhapụ ebe ụmụ obere ụmụaka na-eme njem na wiil. Na n'ókèala nke ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ebe ọtụtụ mmadụ nọ, ọ dị ezigbo mkpa. Tụkwasị na nke a, ekwenyela na eziokwu bụ na akpa ụmụaka maka ịkwanyere ugbọ, na-enweghị aka, ìhè na ọbụna mmetụta dị mma - ọ bụ nke ọma na nke mbụ.
Echiche nke ịmepụta akpa akwa ụmụaka na wiil anọ dị iche iche chetara onye mmepụta America bụ Rob Lowe na 1997. Na mgbakwunye na ọrụ bụ isi nke ịkwanye ihe ụmụaka, ọ kwadebere akpa akpa ụmụaka na ogologo aka na ihe dị mma nke dị mma maka ịnọdụ ala. Na akpa dị otú a, ndị nne na nna na-ezere ụmụntakịrị ụmụaka na ọdụ ụgbọ elu, dịka ndị na-eto eto na-eji obi ụtọ na-agba ha ọsọ site na nnukwu ọnụ ụlọ na ebe dị mma. N'ụzọ dị ịtụnanya, akpa akwa TRUNKI jisiri ike ruo mgbe a gbasara afọ 10. O kwere omume na ndị na-azụ ahịa enweghị ike ikweta na obere akpa akwa a dị 18 lita! Na ihe ụmụaka, na ihe ụmụaka ji egwuri egwu, na akwụkwọ - ọ nwere ike itinye ya n'ihe niile.
A na-eme akwa akwa TRUNKI nke ihe onwunwe polymeric dị arọ, ya mere ọ ga-ekwe omume ịgafe ya na nwatakịrị nke ịdị arọ ya anaghị eru 50 kilogram. Na mgbakwunye, a na-ere ngwa ahụ site na paspọtụ, ebe onye obere njem nwere ike idekọ oge kachasị mma nke njem ya. E nwere igbe dịka dollar 120.
Akpa njem mbụ na-agwụ ike. Samsonite ụlọ ọrụ Belgian na-enye ụmụ obere akpa akwa ụmụaka, bụ ndị nwere ike ma bụrụ ndị mbụ. Ọfọn, ụdị nwatakịrị ga-enwe mmasị n'ịduzi nwa nwanyị, dinosaur ma ọ bụ ụgbọala ọkụ? Ọ bụ ezie na ndị nne na nna nọ na-arụsi ọrụ ike na-egbu akwụkwọ, na-eguzo n'ahịrị, nwatakịrị ahụ ga-ahụ ihe ọ ga-eme mgbe nile. Ndị na-emepụta ihe ahụ abụghị naanị banyere imepụta akpa akwa, na banyere nchekwa ha. Ihe eji eji ha eme ihe dị ezigbo mma, ọ dịghịkwa arọ ọla ma ọ bụ toxins. Uru ọzọ - ngwa ngwa, nke e mepụtara kpọmkwem maka mkpịsị aka ụmụ. Ọnụ uwe Samsịn dị ihe dị ka $ 150.
Ọ bụrụ na ịchọrọ akpa akpa ụmụaka na obere akpa, ụmụaka Eggie bụ ihe ị chọrọ! Akpa akpa akpa akpa akpa ụmụaka nwere ike imeri ihe nwatakịrị na-eji arụ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị, mgbe ahụ, Eggie adịghị atụ egwu ya na ngwa ngwa okporo ụzọ. Ihe dị iche iche ha bụ bụ ìhè nke ìhè. Ị gaghị ahapụ nwa ahụ site n'ọhụụ n'ọchịchịrị, dịka akpa akpa ụmụaka na wiil ndị na-enwu gbaa ga-ahụ mgbe niile. Nwatakịrị ahụ ga-enwe obi ụtọ maka imepụta akpa akwa ya: ọtụtụ ụmụ anụmanụ, ndị dike na-akọ akụkọ ihe mere eme, ụgbọala. Ọnụ ego dị otú ahụ sitere na dollar 70.
Egwuregwu ahụ "Nkume-nku"
Kedu otu esi eme ihe nkpuchi?
Ụmụaka na nwamba
Iwu nke omume maka ịzụ ụmụ
Kedu ka esi eme pusi nke plasticine?
Nwatakịrị na-eto afọ 2-3
Ugbo ite maka ụmụaka
Ọrụ rụrụ arụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara na isiokwu Afọ Ọhụrụ
Cones na isi
Ulo elu na-esi ísì
Esi ewepu onwe gi - ndụmọdụ nke ndi ọkà n'akparamàgwà mmadu
Onye na-eme ihe nkiri Jared Leto ga-eweta otu n'ime ísìsì Gucci maka ụmụ nwoke
Uwe akwa uwe 2013
Sunflowers si sweets - a na-arụ ọrụ klas
Diri na afo n'afọ ime
Ebube na-egbuke egbuke - 60 ihe atụ ihe atụ nke ihe opupu mmiri-okpomọkụ nke ihe osise
Onye-amuma Ịlaịja n'Agba Ochie - Ekpere
Ihe nkwụ ọka na-eme ka ọ dị n'ime ime ụlọ - imepụta atụmatụ ime ụlọ nke oge a
Enwere m ike soro nwa ahụ na-eje ije n'oge okpomọkụ?
Site n'aka aka nke Justin Bieber, nwa agbọghọ si Instagram ghọrọ ihe nlereanya
Omume nke Kegel mgbe mwepụ nke akpanwa
Foto ndị dị n'ime ime ụlọ ahụ bụ Feng Shui
Tartlets na nshịkọ dị